Ukutyelela EKhambodiya | Amazwe Nabantu
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
AMAZWE NABANTU | EKHAMBODIYA
IILALI EZISEMANZINI, abantu abaquqa bebuyelela ezivenkileni kunye nezitrato ezizele izithuthuthu ezikhwelise iinkukhu eziphilileyo neefriji—ezi zezinye zezinto eziseKhambodiya.
Abantu baseKhambodiya baziwa ngokuba nobubele nobuhlobo, yaye basondelelene. Xa behleli kunye bezipholele, enokuba bayaqala ukudibana badla ngokubizana mntakwethu, dadewethu, makazi, malume, makhulu okanye tatomkhulu!
Abanye abantu baseKhambodiya bahlala kwizikhitshane, ngoxa abanye behlala kwizindlu ezidadayo. Kukwakho nezikolo, iikliniki, iivenkile nezikhululo zepetroli ezidadayo
Isiqhamo idragon siyathandwa eKhambodiya
Irayisi sesinye sezidlo ezibalaseleyo eKhambodiya. Isidlo salapho siba neendidi ezintathu okanye ezine, kuquka isuphu. Intlanzi ithandwa gqitha kwelo lizwe. Iqhelekile into yokuba isidlo esinye sibe nokutya okuswiti, okumuncu, nokunetyuwa eninzi.
Malunga namawaka amabini eminyaka eyadlulayo, amaNdiya awayesiya eTshayina ngezorhwebo ayesima kunxweme lwaseKhambodiya, arhwebe nayo ngesilika nesinyithi, aze wona afumane izinongo, iziqholo, iimpondo zendlovu negolide. Ekuhambeni kwexesha, abantu baseKhambodiya baphenjelelwa zizithethe zaseIndiya nezaseTshayina, kwaza ngaloo ndlela kwanda ubuHindu nobuBhuda. Ngoku, ngaphezu kwe-90 pesenti yabantu abahlala eKhambodiya ngamaBhuda.
AmaNgqina kaYehova ashumayela ngethemba eliseBhayibhileni eKhambodiya. Ancede abantu abaninzi ngencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Ifumaneka ngeelwimi ezimalunga ne-250, kuquka olwaseKhambodiya.
IZIBAKALA EZIBANGELA UMDLA
Abemi: Bamalunga nezigidi eziyi-14
Ikomkhulu: IPhnom Penh
Imozulu: Ifudumele iphinde ibe shushu, ibe nemvula ngamanye amaxesha
Imveliso: Impahla, amaplanga, irabha, irayisi
Bangaphezu kwe-1 500 abantu baseKhambodiya abafunda iBhayibhile kunye namaNgqina kaYehova, yaye bafumana iimpendulo kwimibuzo enjengethi, “Baphi abafileyo?” nothi “Iyintoni injongo kaThixo ngomhlaba?”
Incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova, iyafumaneka nangolwimi lwaseKhambodiya (oluboniswe apha).